Wararka Maanta: Axad, Sept 2 , 2012-Kooxda kubadda cagta ee London Stars oo ku guuleystay koobkii ciyaaraha xagaaga
Kooxda kubadda cagta ee London Stars oo ku guuleystay koobkii ciyaaraha xagaaga Axad, September 02, 2012 (HOL) - Ciyaaraha Xageyga ee sanadwalba lagu qabto dalkan Britain gaar ahaan magalada London ayaa maanta la soo gabagabeeyey, iyadoo ay ka qeybqaateen 16 kooxood oo kakala yimid london, Manchester, Birmigham & Leicster.
Dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada London ayaa si gaar ah u xiiseynayey ciyaarahan oo ay kama dambeysta ( Finalka ) isugusoo baxeen kooxaha London Stars Vs Nabadda Stars halkaas oo ay guusha ku raacday kooxdii ku cayaareysay magaca London Stars . Labada kooxood ayaa waxa ay soo bandhigeen ciyaar aad u xiisa badan. Kooxda London Stars ayaa ku suuldaartay kooxda kale ee Nabadda Stars 3-2 Cayaartaan ayaa waxaa daawashadeeda ay kasoo qeybgaleen ciyaartoydii hore ee qaranka, kuwa kubbada koleyga iyo qeybaha kale ee sportiga. Waxaa halkaas labada kooxoodka lagu gudoonsiiyey abaalmarinadii ay muteysteen iyadoo dhanka kalena ay jireen abaalmarino la guddoonsiiyey ciyaaryahanada kale ee katirsan 16ka kooxood oo qaarkood helay abaalmarino ay kamid ahaayeen ciyaar wanag, gool badis, gool hayaha ugu wanaagsan iyo Gool dhaliyaha ugu badnaa ciyaarahan.
Waxaa sidoo kale halkaas ka hadlay Guddoomiyaha Kooxda London Stars Macalin Daahir Gacmey iyo Tababare Cai Mire. Ibrahim Omar BaafoHiiraan Online London ibrahim.mohamed@hiiraan.com
Axad, September 02, 2012 (HOL) — Hay’adda cilmi-barista iyo wada-tashiga CRD ayaa shalay qalab faneed noocyadiisa kala duwan oo ay ku jiraan qaar casri ah waxay guddoonsiisay kooxda fanaaaniinta Horseed ee ciidamada qalabka sida. Xaflad lagu gunaanadayay Tartankii Xiddigaha Kubadda Koleyga oo Muqdisho lagu qabtay (SAWIRRO) 9/2/2012 2:52 PM EST